Iindaba - "Ukuya eXiandu kunye nokuncama iXuanyuan", Amawakawaka Abasebenzi baseJinbang Holdings Balifezekisile Iphupha Labo “lokunqula izinyanya”
"Ukuya eXiandu kunye nokuncama iXuanyuan", Amawakawaka Abasebenzi baseJinbang Holdings Balifezekisile Iphupha Labo "lokunqula izinyanya"
Ngo-Novemba, i-Jinyun inemozulu emnandi, impepho kunye namafu aqinisekileyo. Ngentsasa yomhla wamashumi amabini ananye, iGolden Stick Holdings Co., Ltd. iqalise ngokusesikweni umcimbi othi "Ukuya kwisiXeko saseXiandu kunye neDini leXuanyuan". Phantse iwaka labasebenzi bahlanganisana ekungeneni kwendlela eluhlaza yeJinyun Binjiang Park kwaye bahamba baya ngakwitempile yaseHuangdi eXuanyuan Huangdi Sacrhetic Centre kumazantsi eTshayina benethemba.
UJinyun Greenway ukalwe njenge- "Most Greenway Greenway" kunye ne "Ten Best Green Road" kwiPhondo lase Zhejiang. Imalunga neekhilomitha ezili-11 ukusuka eJinyun Riverside Park ukuya kwindawo entle yeNtaba yeZhutan eXiandu. Ilitye lomamazala, umalume uJiao, Xiaochi Cliff, Dinghu Peak, Zhutan Mountain ... Ngasentla, iindawo ezibukekayo kunye neentlambo ezintle ecaleni kwendlela eluhlaza yonke indlela, abantu baya kudibana nobuhle bendalo bengalindelanga xa bejika. ngeenxa zonke.
Abasebenzi beJinbang Sports, Jin Gutian Technology, Puqi Digital, Red Black Technology, Jinquan Technology, Megani Precision Equipment, Dolby Puqi namanye amasebe eGolden Stick Holdings bakwimimoya elungileyo, kwaye bahamba kwindlela eluhlaza ngokucocekileyo, kunye nolayini wolula ngaphezu kweemitha ezingama-200. , Waba "yeyona ndawo intle" ecaleni kwendlela eluhlaza yosuku. Abasebenzi abaninzi bathi: "Indawo kaJinyun intle kakhulu, singenza umsebenzi kunye nobomi. Kufuneka sisebenze nzima apha ukuze sazi ixabiso lethu ebomini".
Ngentsimbi ye-15 emva kwemini, amafu avuleka kwaye ukuphuma kwelanga, ukukhanya kwelanga ngegolide kubonakalise iDinghu Peak kunye neXuanyuan Hall, umsitho wokuzimisela nokunqula izinyanya weJinbang Holdings Co., Ltd. Amawakawaka abasebenzi bema kwibala eliphambi kwetempile benqula ubukhulu besizwe samaTshayina. Ukhokho uXuanyuan Huangdi ukhumbula ukufaneleka kokhokho kwaye ukhuthaza umoya wophuhliso lweshishini lentonga yegolide.
Umsitho wokunqula izinyanya wawuqalisa ngemigqomo nangeentsimbi. Ezi ngoma zingama-34 zimela amaphondo angama-34, oomasipala, imimandla ezimeleyo, kunye nemimandla ekhethekileyo yolawulo, kunye neentsimbi ezili-15 zeentsimbi ezimele inzala yamaTshayina neTshayina kwihlabathi liphela. Umbingeleli omkhulu, uJinbang Holdings, amalungu ebhodi kunye nabameli bamasebe ahlukeneyo ngokulandelelana bahlonipha uXuanyuan Huangdi ngeziqholo eziphezulu, iibhasikiti zeentyatyambo, kunye namadini amathathu ezilwanyana.
Emva kukaXu Yongqiang, usihlalo weGolden Stick Holdings Co., Ltd. wazisa iwayini kwiXuanyuan Huangdi Statue, ummeli weGolden Stick Holdings wafunda isicatshulwa, bonke abathathi-nxaxheba baqubuda kwiXuanyuan Huangdi Statue kathathu. Umsitho wagqitywa ngempumelelo kumnyhadala omangalisayo womculo kunye nomdaniso.
Igazi elo limile kwaye lidluliselwe kwizizukulwana ngezizukulwana. UXuanyuan Huangdi ngukhokho wobuntu wesizwe samaTshayina, uvulindlela omkhulu kunye nomsunguli wempucuko yaseTshayina, kunye nolwalamano olufanayo lokomoya loonyana neentombi zaseTshayina ekhaya nakwamanye amazwe. Ukubanjwa ngempumelelo komsitho wokunqula izinyanya weGolden Stick Holdings kuzalisekisile iphupha labo bonke abasebenzi lokuba bathathe inxaxheba ekunquleni ukhokho uXuanyuan Huangdi.